ဘင်္ဂါလီ နဲ့မြန်မာ နိုင်ငံသားများကို လူကုန်ကူးမှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ တရားခံ သန်းကြွယ်သူဌေးကို ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီး – Maharmedianews
ဘင်္ဂါလီ နဲ့မြန်မာ နိုင်ငံသားများကို လူကုန်ကူးမှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ တရားခံ သန်းကြွယ်သူဌေးကို ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီး
ကိုတုတ်လို့လူမှောင်ခို ရိုဏ်းမှာ လူသိများတဲ့ လူကုန်ကူးမှုမှာ အရေးပါတဲ့ တရားခံ Santipiyakulစန်တီပီးယာကွန် အသက် (၅၉) နှစ်ဟာ ထိုင်းအစိုးရက အလိုရှိနေတဲ့ လူကုန်းကူး တရားခံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်က ထိုင်းမလေး နယ်စပ် ဟတ်ယိုင်မြို့နယ် ပဒန်ဘေဆာ သစ်တောထဲမှာ အခိုင်အတာ စခန်းလုပ်ပြီး မလေးဝင်ကြမယ် မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကို တထောက်နားစခန်းအဖြစ် ထိမ်းသိမ်းထားစဉ်မာ လူသတ်မှုတွေ ညင်းပန်း နှိပ်စက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြတာပါ။
ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေလက်ထဲကို တရားခံပြေး ကိုတုတ်ကို လွဲပြောင်းယူခဲ့ပြီးသူ့ ကိုချမှတ်ခဲ့တဲ့ ထာင်ဒဏ် ၂၇ နှစ်ကနေ ၈၇နှစ်အထိ တရားရုံးက တိုျးမှတ်မြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။
One of the key suspects, wanted by the police for alleged involvement in the trafficking of Bingali migrants from Myanmar into southern Thailand four years ago, has been arrested in Cambodia and handed over to Thai immigration police.
← သမီး မြတ်စုထွန်းလွင်ရဲ့ “အဖေ့အတွက် နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်စာ”
လိုင်းပေါ်က ချစ်သူက တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်လာဖို့ ခေါ်လို့ သွားခဲ့ရာက . . ချစ်သူကို မတွေ့ရဘဲ . .သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေး →